Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny UN sy ny ICAO dia manampy ny ekipa fiaramanidina fiaramanidina hiady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko
Nanao dingana lehibe ny Firenena Mikambana hisorohana ny fanondranana olona an-tsokosoko, miaraka amin'ny fanombohana ny fiofanana an-tserasera vaovao hanohanana ny fampiharana ny Toro-làlana ICAO-OHCHR momba ny fiofanana amin'ny mpiasan'ny kabinetra amin'ny famaritana sy ny valiny amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Nivoatra tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Birao misahana ny zon'olombelona mikambana (OHCHR), ny Mazava ho azy fa ny e-fianarana Mazava ho azy fa mizaha ny fotoana tsy manam-paharoa mpiasan'ny kabinetra mila mandinika ny mpandeha mandritra ny faharetan'ny sidina ary mety mamantatra sy manampy ireo tra-boina mpivarotra olona. Ny singa fanampiny amin'ny lalam-piofanana koa dia misy lanjany ho an'ny matihanina amin'ny seranam-piaramanidina sy matihanina amin'ny seranam-piaramanidina hafa.
"Ny vondrom-piarahamonin'ny fiaramanidina manerantany dia manana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fanondranana olona an-tsokosoko," hoy ny fanamafisan'ny sekretera jeneralin'ny ICAO, Dr. Fang Liu. "Ny fampivelarana ny fiofanana vaovao, miorina amin'ny torolàlana ICAO-OHCHR dia manome fototra iray lehibe ahafahanay manolotra fanamafisana ny fahaiza-manao ary farany manampy amin'ny fampitsaharana ny fanararaotana ny fitaterana an-tserasera ataon'ireo mpivarotra."
“Ny fanondranana olona an-tsokosoko dia heloka bevava mampihoron-koditra ary fanitsakitsahana ny zon'ireo niharam-boina. Izany no antony maha-zava-dehibe ny ezaka ataon'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka amin'ny ady amin'izany. Ity fanitarana fiofanana ho an'ny ekipazy sy ny indostrian'ny fizahan-tany midadasika ity dia singa iray lehibe amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sasantsasany amin'ireo olona marefo indrindra ", hoy ny kaomisera ambony an'ny zon'olombelona, ​​Michelle Bachelet.
Ny birao iraisam-pirenena momba ny asa dia nitatitra fa olona 1-amin'ny-200 manerantany dia mbola terena hiasa sy ny toe-piainana vokatry ny fanondranana olona an-tsokosoko, fanao iray heverina ho toy ny fanandevozana maoderina.
Maneho ny zava-misy fa maro tamin'ireo niharam-boina ireo no nifindra isam-pirenena tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina ara-barotra, ny fiofanana ICAO-OHCHR natomboka koa dia misy resadresaka an-tsary miaraka amin'ireo sisa velona amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy kaompaniam-pitaterana izay efa mampiofana ny ekipan'ny tranony momba an'io lohahevitra io.
Ny fiofanana ICAO-OHCHR vaovao hiadiana amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ho an'ny ekipa an-trano dia tsy maintsy ampiana fiofanana momba ny zotram-piaramanidina bebe kokoa amin'ny fomba sy fomba fanao anatiny manokana. Izy io dia azon'ny mpiasan'ny ekipazy sy ny matihanina fiaramanidina hafa amin'ny alalàn'ny vavahady e-fianarana an'ny ICAO.